နိုင်ငံသစ်တည်ချိန်၊ ဝတ်မှုန်ကူးသော သံမဏိလိပ်ပြာနှင့် အာဂ ပြည်သူတွေ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဥဩ (ချယ်ရီမြေ) - အပြုံးမဝေဖြာနိုင်တဲ့ ဖုန်းဝေဒနာ
လက်ရှိအစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာပြီး၊ အခုအခြေနေထိရောက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တာ၊ NLD ကိုပြန်လည်စုစည်းပြီး ခိုင်မာအောင်ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့တာ၊ နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေ၊ သံတမန်တွေ၊ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာ၊ သတင်းမီဒီယာသမား တွေ၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာ လုပ်ဆောင်ဖြေကြားပေးတာ၊ တွေ့သင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟန်းရှင်လူပေါင်းများစွာနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ အချိန်ပေးရတာ၊ နိုင်ငံတကာဖိုရမ်တွေ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခမ်းအနားတွေအတွက် သဝဏ်လွှာနဲ့မိန့်ခွန်းတွေပေးပို့ခဲ့ရတာ၊ NLD ရုံးသစ်ဖွင့်ပွဲ၊ စာကြည့်တိုက် ဖွင့်ပွဲ၊ အနုပညာပြပွဲများ၊ အာဇာနည်နေ့၊ ပြည်ထောင်စုနေ့၊ အမျိုးသားနေ့ လိုအခန်းအနားကြီးတွေအတွက် တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောပေးရတာ၊ နယ်လှည့်စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်ပေါင်းများစွာကို မနားမနေဆက်တိုက်ထွက်ပြီး ပြေဆိုလုပ်ကိုင်နေရတာ၊ စတာတွေရေးပြရမယ်ဆိုရင် ဒီ ဆောင်းပါးဟာ တော်တော်ရှည်သွားနှိုင်တယ်။
6 Responses to နိုင်ငံသစ်တည်ချိန်၊ ဝတ်မှုန်ကူးသော သံမဏိလိပ်ပြာနှင့် အာဂ ပြည်သူတွေ
kyaw zay ya on March 8, 2012 at 12:12 pm
Appreciate the writer for this article.
ohnmar on March 8, 2012 at 3:18 pm
mya on March 8, 2012 at 3:47 pm
အမေစုကို အားကျတယ် နိုင်ငံရေးလည်း ၀ါသနာပါတယ် ဒါပေမဲ့ တခြားနိုင်ငံရေးသမားတွေကြတော့ သိပ်မယုံရဲဘူး- ဘာလုပ်ရမလဲ အကြံပြုပေးပါ-ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Zaw Win Aung on March 8, 2012 at 5:36 pm
I want to read the next article from Min Kaung Chit.
u kaw on March 8, 2012 at 7:29 pm
သိပ်ကောင်းတယ် ၊ဒီလို အချိန်ပေးပြီး ရေးတင်တဲ့ စာရေးသူကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဖတ်မ်ိသူတွေ မြင်သာသွားတာပေါ့။
lin on March 8, 2012 at 11:46 pm
very pleased to read it.